Raggeenna qayb baa kufsiga karaamo ka hela! – Maandoon
February 25, 2019 Khadra Abdulle
Marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska Caasha yar, aabbe iyo hooyo xanuunka waan idinla qabaa, waxaan ahay hooyo, waan dareemayaa saaka xanuunka aad dareemaysaan, waana dareemayaa Caasha xanuunka ay dareentay.
Caasho kufsi ma ay mudnayn ee waxay mudnayd kool-koolin iyo kalgacayl ,waxay mudnayd macaan iyo marxabayn, waxay mudnayd naxariis iyo nugayl, waxay mudnayd waxa ubad mudan yahay oo idil.
Waa nasiib xumo in saaka saqiir inta la kufsado haddana la qasho. Caasho, maamo waan kuu murugoon, awooddaydu saaka waxay ku kooban tahay inaan qalin kuugu hiilliyo. Laakiin waxaa abdaynayaa in ay timaaddo maalin aan garab kuugu hiiliyo. Dalkaagii ayuu kufsigu ka noqday karaamo, dalkaagii ayaa noqday meel dumarka maanka ,maskaxda iyo macdanta laga kufsado.
Kufsigu wuxuu noqday anigana waa i kan oo wiil walba yiraahdo hebelba wuu kufsaday, waxna lama oran’e anigu na aan kufsado. Ma jiro maamul wax ka qabta, ma jiro sharci qabta kufsadaha, ma jiraan culumo iyo caamo cid kufsigu la yahay denbi ciqaab mudan.
Caasho gabar kasta oo soomaliyeed ayaa la kufsaday, intooda badan maskaxdaa laga kufsaday, in kale oo badanna macdantaa laga kufsaday. Kuwaa raggi kufsaday la nool oo ubad u dhala, habeen iyo maalinna qalbiga ka ooya.
Aan u soo noqdo hadafkayga. Ma ahan Caasho gabadhii u horraysay, ma na ahan gabadhii u danbaysay. Kufsigu waligii ayuu soo socday, waana wax hirgalay oo cidina aysan wax ka qaban. Habeen aan gabar la kufsan ma jiro, laakiin inta la ogaado ayaa yar inta aan la ogaan ayaana badan
Mid yar iyo mid wayn ba waa kufsi sugto. Waxaa ka sii daran gabdhaha dhimirka ka xanuusan ayaguna habeen kasta la kufsada cidi uma hadasho,, cidi ma oga cidina ma dareento, ayaguna awood ay ku hadlaan ma leh.
Sababta ugu wayn ee kufsiga ka dhigtay wax ragga qaybi ku faanaan waa liidida dumarka lagu hayo. Gabar habeenka ay dhalatay laga naxay maxaa diidaya in la kufsado? Gabar la yiri nusqaan ayaa tahay maxaa diidaya in la kufsado? Gabar reerka ay kali ku tahay loogu yeero gablan maxaa diidaya in la kufsado? Gabar la yiri ama god ku jir ama guri maxaa diidaya in la kufsado?
Kufsigu maaha wax saaka bilowday ma na aha wax saaka dhamaanaya ee waa wax sii soconaya haddaan gabdhaha garaadka laga korin hadaan gabdhaha loo aqoonsan noole wiilasha la mid ah.
Ma garanayo gabar aabbeheed aamminsan yahay in ay naaqus tahay sida ay kufsi uga badbaadi karto! Midna ogaada, in gabar maanka laga kufsado iyo in macdanta laga kufsado waa isku mid. Ummad aan qiimayn dumarkooda kufsi iyo kurbo kama baxayaan, waa hubaal.
Ugu danbayn, anigu ma ogi maamul aan is leeyahay wax buu ka qaban kufsiga, waayo kufsigu wuxuu noqday tusbax furtay oo maalin iyo habeen walba taagan. Laakiin dumarka ayaan oran lahaa fadlan u midooba nacabka habeen iyo maalin idin qalanaya, ee cadowga idiin ah. Ma jirto cid aad u xisaabsantihiin, ma jirto cid idiin og in aad tihiin dad nool. Qof aan asagu heeryada iska qaadin cidi ka qaadi mayso. Taasi waa xaqiiq lama dhaafaan ah.
← Xarafkii saxaabiga dili lahaa!
Akbar: diin iyo dowlad →
June 17, 2016 Bogga Maandoon 606